Ahoana ny fomba hivarotana ny anaranao | Martech Zone
Ahoana ny fomba hivarotana ny anaranao
Sabotsy, Desambra 24, 2016 Alarobia, Desambra 28, 2016 Douglas Karr
Raha toa ahy ianao dia manohy mandoa ireo saram-pisoratana anarana anarana isam-bolana fa manontany tena raha hampiasa azy io na raha misy olona hifandray aminao hividy azy. Misy olana ny mpivady amin'izany, mazava ho azy. Voalohany, tsia… tsy hampiasa azy io ianao. Atsaharo ny fikajianao ny tenanao fa mandany vola be fotsiny isan-taona ianao nefa tsy misy tambiny amin'ny fampiasam-bola na inona na inona. Faharoa, tsy misy mahalala fa tena mivarotra izany ianao - koa ahoana no hahazoanao tolotra?
Folo taona lasa izay, ny fizotrany dia ny fanaovana fizahana whois ny sehatra, mamantatra hoe iza no tompony, avy eo manomboka ny dihin'ny tolotra sy ny tolotra mifanohitra. Vantany vao nifanaraka tamin'ny vidiny ianao dia tsy maintsy manomboka kaonty escrow. Antoko fahatelo izay mihazona ny vola hahazoana antoka fa nafindra tsara ilay sehatra. Amin'izay fotoana izay dia mamoaka ny vola amin'ny mpivarotra ny kaonty escrow.
Mora kokoa izao. Mampiasa serivisy toa DomainAgents, azonao atao ny mitanisa ireo fonenanao rehetra amin'ny serivisiny. Izy ireo dia mandray sombin-javatra mahasalama amin'ny varotra, saingy mampifangaro tsena azo tadiavina izy ireo, pejin-tsoratry ny fanao ary ny kaonty escrow ao anatin'ny sehatra iray. Izany dia manamora ny fahazoana sy amidy ny fonenanao.
Inona no andrasanao? Ampidiro izao ireo rehetra tsy ampiasaina (ary na dia ireo efa nampiasaina aza):
Tadiavo na amidio ny anaranao
Ahoana no hametrahanao ny vidin'ny fangatahana amin'ny domaine anao?
Efa ela aho no nanao an'io ary fanontaniana sarotra izany. Mety ho hitan'ny mpivarotra fa orinasa io na mpividy mpanankarena izay mividy sy mifanakalo hevitra amin'ny vidin'ny fividianana lehibe. Na ny mpivarotra dia mety ho tsinontsinona ary avelao ny anarana domain goavambe ho an'ny zavatra kely. Izahay dia nividy sy nivarotra anarana an-taonina ary toe-javatra mampiady saina foana. Misy fitsipika tsotra toy ny domains fohy izay tsy manana dash na isa matetika dia mahafinaritra. Ny anaran'ny sehatra lava kokoa misy teny tsy misy tsipelina dia tsy mandeha tsara ihany koa.
The TLD .com dia mbola sarobidy kokoa noho izy io ny fanandramana voalohany ao anaty fikarohana na browser hijerena tranokala. Raha tena nisy atiny ny domain ary nitondra ny valin'ny karoka (nefa tsy toerana fitsidihan'ny malware na pôrnôgrafia), dia mety ho zavatra iray aza izany ho an'ny orinasa manandrana mitondra fifamoivoizana na fahefana manam-pahefana amin'ny marika misy azy ireo.
Ny fitsipiky ny ankiben-tànana dia ny fahitsiana amin'ny fifampiraharahana ataontsika. Manoro hevitra foana aho ny amin'ny mpividy mba hanao ny tolotra voalohany hanome ny valiny ny mpivarotra raha toa ka mendrika ny fifampiraharahana. Amin'ny maha-mpividy antsika dia mety hampahafantatra izahay fa mividy amin'ny anaran'ny antoko fahatelo izahay satria maniry hanome vidiny mirary nefa tsy mandoa be loatra. Ampahafantarinay ny mpivarotra ihany koa fa maniry handoa izay vidiny izahay nefa tsy rovitra ny mpivarotra. Rehefa tapitra ny fifampiraharahana dia matetika faly ny roa tonta.
Bakc to DomainAgents. Amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny DNS ho an'ny anarako, DomainAgents dia mametraka pejy fitobiana lehibe hahamora ny mividy ilay sehatra. Ity misy ohatra tsara iray, zahao ny iray amin'ireo fonenako - adiresy.com.
Ireto ny domains hafa napetrakay hamidy, ny sasany tsara sy fohy, ny sasany malaza (ary ny tolotra farany ambany dia lehibe).
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohy mpiara-miasa aminay izahay DomainAgents mandritra ity lahatsoratra ity.
Tags: fivarotana domaindomainagentsohatrinona ny sandan'ny anaranaony fomba vidiny anarana domainny fomba hivarotana anarana domainmivarotra sehatramivarotra domainstld
Brand24: Mampiasa ny fihainoana ara-tsosialy hiarovana sy hampitomboana ny orinasanao
Ahoana ny fomba hanatsarana ny pejy fandraharahana amin'ny Facebook
Serivisy Tech Computech
Dec 29, 2016 ao amin'ny 8: PM PM
Lahatsoratra tsara miaraka amin'ny torohevitra tsara. Mahomby kokoa ny fandoavana ireo domains tsy ampiasaina ireo noho ny fandoavana hatrany ny fandoavam-bola isan-taona.